Akhri qisadaan qurxoon | Somalisan.com
Home Afsomali Akhri qisadaan qurxoon
Akhri qisadaan qurxoon
Akhri qisadaan qurxoon. Waxay tiri Caa’isha (RC) anoo ku jira qolkayga oo maro tolaya baa faynuuskii iga damay oo qolkii igu madoobaaday oo irbadi aan wax ku tolayayna iga dhacdey anoo sidii ah baa waxaa ii soo galay Nabiga sallallaahu calayhi wa salam markaaas baan wajigisa nuurka ka baxayay dartiis aan irbadaydii arkey waxayna tiri wallaahi ilaahey baan ku dhaartaye ifka wajigiisa ka baxaya qolka daafihiisoo dhan buu ifiyay.
Waxayna ku tiri aabahey halugugu furtee Nabigi ilaahayow wajigaaga maxaa ka nuur badan markaasu yiri Caashoy hoog wuxu u sugnaadey qofkaan wajigayga arkayn maalinta qiyaame. Markaasey tiri oo Nabi Allow yaan wajigaaga arkaynin maalintaas? Markaasu wuxuu yiri qofkii agtiisa la igu xuso oo aan igu sallin-Sallalaahu calayhi wa salam.
Allahuma salli calaa Muxamad wa calaa aali Muxamad kama sallayta cala Ibraahima wa calaa ali Ibraahima fil caalamina innaka xamiidul majiid. Dhib kuguma hayso inaad gaarsiisid dadka adigoo xasuusinaaya arintaas.
Nabigu sallallaahu calayhi wasalam wuxuu dhahay (wax iga gaarsiiya dadka wallow hal aayad ha ahaate) kusalliya Nabigeena Muxamad sallallaahu calayhi wasalam salaan tan ugu fiican. Waan ka dalbadey please haygu celin, waxaan rabaa inaad garsiisid asxaabtaada oo dhan si ay ugu salliyaan Nabiga-scw.
Ka bilow qofka kuugu qaalisan saaxiibadaa Laakiin markaad dadka u qaybisid makaa dhamaanaysaa? anniga iga dhamaanmayso inaan ku salliyo Nabigeena NNKHA.
Nabiga ku salli toban jeer gaarsiina toban qof si ay hal saac gudaheed Nabiga ugu ahaato 100 salli. Waxay miisaankaaga kuugu noqonaysaa 1000 000 salat. Ha dhihin dhib maleh taasi waa 1000 000 salli Nabi ah oo kuu shafeeco qaadaysa
Previous articleDadaab Refugees Call For Better, More Standard Support Somalia: Tropical Cyclone Pawan Emergency Plan oO Action
Next articleToos u daawo Faramaajo oo khudbad ka jeediyey Mashruuca Daahfurka Soo Bandhigida qorsha 9aad ee horomarinta qaranka 2020 ilaa 2024
Canshuurta Malagu Xajin karaa ‘Duqa Muqdisho Dhul miyuu Bixiyey ‘ amnigu ma dayacan yahay...
Somalisan News - August 25, 2018
Ina shaawey oo loo magacaabay agaasime ku xigeenka hay.ada socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliyeed
Somalisan News - June 6, 2017
Dhageyso Xaaf oo Diyaarad qaas ah Abu Dubai ka soo kireystay Hargeysa saacado lagu...
Somalisan News - September 24, 2017
Warmurtiyeedka shirka dhaqanka hawiye oo laga soo saaray qodobo muhiim ah
Somalisan News - January 12, 2021